आज मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, कुन पार्टीबाट को – को बन्दैछन् मन्त्री ? – GALAXY
आज मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, कुन पार्टीबाट को – को बन्दैछन् मन्त्री ?
काठमाडौँ – सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्दै लाग्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारको कामले आज पूर्णता पाउँदैछ ।सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज दिउँसो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले आज दिउँसो ३ बजे मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ’, उनले भने, बिहीबार दिउँसो ३ बजे मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’
यसअघि मंगलबार सत्तारुढ दलको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँट गरेको थियो । जसअनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित आठ, माओवादी केन्द्रले छ, नेकपा (एस) र जसपाले चार/चारवटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिए । सत्तारुढ तीन दलबीच एक/एक राज्यमन्त्री लिने सहमति गरेका भएको छ ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रले देवेन्द्र पौडेल, शशी श्रेष्ठ र महेश्वर गहतराजलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ। भने, बोधमाया यादवलाई भने राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय भएको माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए ।माओवादीको भागमा पाँच मन्त्रालय परेको छ। सो पार्टीका तर्फबाट यसअघि नै दुई जना मन्त्री बनिसकेका छन्।
माओवादीले पाउने बाँकी मन्त्रालय ठोस रुपमा टुंगो लागेको छैन। माओवादीले शिक्षा र स्वास्थ्यमध्ये एक मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, भूमि सुधार युवा खेलकुल मन्त्रालय पाउने भएको छ।
एकीकृत समाजवादीले रक्षा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाएको भएको छ । समाजवादीबाट एकजना राज्यमन्त्रीसमेत हुने भएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पाउने सहमति जुटेको एक नेताले बताए।
कांग्रेसको तर्फबाट यसअघि नै प्रधानमन्त्री, तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनिसकेका छन्। सो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्का र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ बनेका हुन्।अब मन्त्री हुनेमा दिलेन्द्र बडू, मिलेन्द्र रिजाल, उमाकान्त चौधरीको नाम फाइनल भएको छ।